Wadamada Yurub ee ugu jaban si ay wax ugu bartaan ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah 2022
Wadamada ugu Qaalisan Qaarada Yurub ee Wax Lagu Barto Ardayda Gudaha iyo Kuwa Caalamiga ah
Waa kuwan qaar ka mid ah dalalka Yurub ee ugu raqiisan inay wax ku bartaan dibadda ardayda caalamiga ah. Jaamacadahani waxay qaadaan khidmadaha ugu hooseeya ee waxbarashada iyo gelitaanka Yurub.
Wax ku barashada dibadda waa riyada ku dhowaad arday kasta iyo sidoo kale diiradeena ugu weyn ee barnaamijkan.
Waxaan u qornay boqolaal hagayaal ah oo ardayda intooda badani ay diiradda saaraan arrimaha waxbarashada caalamiga ah si looga caawiyo ardayda caalamiga ah hamigooda ah inay wax ku bartaan meel ka baxsan dalkooda ama deeq waxbarasho ama is-kafaala qaad.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ardayda badankood ay la kulmaan waxbarashada dibedda sida maalgelinta. Tani waa tiro wanaagsan oo arday ah oo ku tiirsan oo ku tiirsan kaliya deeqda waxbarasho ama nooc kasta oo kale oo kafaala qaad ah oo ah rajada kaliya ee ay ka qabaan inay wax ku bartaan meel ka baxsan dalalkooda.
Sababtoo ah arrimahan maalgelinta, waxaan daabacnaa fursado waxbarasho oo aan tiro lahayn oo aan ku barannaa hagitaanno dibedda ah si looga caawiyo inay suurta gal tahay inay yareeyaan kharashyada iyo tiro jaamacado raqiis ah, barnaamijyo iyo koorsooyin dibedda ah.
Ardaydu sidoo kale waxay qaadan karaan koorsooyin khadka tooska ah waxayna ka heli karaan shahaadooyinka shahaadada khadka tooska ah kharashka yar iyo xitaa waqti gaaban. Koorsooyinka deg-degga ah ee ay bixiyaan jaamacadaha caalamiga ah waxay qaadan karaan waqti ka yar kalabar ama xitaa ka hooseeya kala-bar muddada barnaamijka caadiga ah (oo inta badan celcelis ahaan ah 3 - 4 sano. Koorsooyinka shahaadada la dedejiyey waxay qaadan karaan 2yrs, 1yr ama xitaa lix bilood si loo dhammaystiro) barnaamijka iyo hel shahaado)
Yurub oo ah dal dan u ah ardayda caalamiga ah waxay leedahay tiro jaamacado waaweyn ah. Waad la yaabi doontaa inaad ogaato in qaar ka mid ah jaamacadahaani ay leeyihiin khidmad waxbarasho oo jaban, oo ku filan oo aad awoodid inaad awoodid xitaa deeq waxbarasho la'aan.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Yurub kama qaadaan lacag dalab ah ka yimid ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Tan macnaheedu waa, waxaad dalban kartaa jaamacadahaan bilaash oo waa laguu ogolaan karaa haddii aad u qalanto.
Halka ay jiraan jaamacado jaban oo Yurub ah oo aad codsan karto, waxaan diirada saareynaa halkan waa meelo Yurub ah oo waxoogaa ka yar kharashka ardayda caalamiga ah. Markaa haddii aad tahay arday caalami ah oo raadinaya fursado aad ku dhimeyso kharashyada isla markaana aad u keydiso waxoogaa lacag ah, xulashada iskuulada aad xiiseyneyso inaad la socoto waddamadan raqiiska ah ee Yurub ayaa kaa caawin kara waddo dheer oo lagu keydsanayo kharashka.
Wadamada Yurub Ugu Qaalisan Si Loo Barto
JARMALKA - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban oo Wax Lagu Barto
BELGIUM - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban oo wax laga barto
HANGARY - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban si loo Barto
TALYAANIGA - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban oo wax laga barto
FRANCE - Wadamada Qaarada Yurub ee Raqiiska ah
FINLAND - Wadamada Qaaradda Yurub ee Raqiiska ah in wax laga barto
AUSTRIA - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban oo wax laga barto
NORWAY - Wadamada Qaaradda Yurub ee Raqiiska ah
SWEDEN - Wadamada Reer Yurub ee Raqiiska ah
UKRAINE - Wadamada Qaaradda Yurub ee Jaban oo Wax Lagu Barto
Jarmalka ayaa marwalba ah wadanka ugu raqiisan Yurub ee wax lagu barto maadaama qaar ka mid ah jaamacadaheeda dowladeed aysan xitaa kajirin khidmadaha waxbarashada gaar ahaan ardayda gudaha. Waxbarashadu waa lacag la’aan Jarmalka.
Waxaad awoodi kartaa si bilaash ah wax uga baro Jarmalka, inkasta oo sidaan idhi, ay ugu weyn tahay ardayda gudaha. Ardayda caalamiga ah waxay go aansan karaan inay codsadaan mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo ee Yurub, tani waxay sidoo kale ka caawin doontaa iyaga inay sidoo kale wax ku bartaan bilaash.
Haddii aad rabto in aad Barashada Jarmalka, waa inaad ogaataa sidaan horey u sheegnay, inaad wax ku baran karto Jarmalka si bilaash ah. Intaad dalbaneysid jaamacadaha jira, waxaad dalban kartaa deeqo waxbarasho sidoo kale si ay kaaga caawiso dhimista kharashyada. Haddii aad u socoto koorsooyin la xiriira caafimaadka, waa inaad iska hubisaa hagehayaga jaamacadaha ugu sareeya dawada Jarmalka.
Qiimaha Nolosha: cheap
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: EUR 1000 sanadkii.
Jaamacadaha Jarmalka ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Technische Universität Berlin; Freie Universität Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin; Jaamacadda Ludwig Maximilian ee Munich iyo Jaamacadda Farsamada, Munich.
Beljim waa mid ka mid ah wadamada ugu raqiisan Yurub ee wax lagu barto gaar ahaan ardayda caalamiga ah, oo leh qiimo jaban oo nolol ah hadana ilaalinaya heer nololeed sare.
In kasta oo ardayda yurubiyanku ay si bilaash ah wax uga baran karaan Belgium, ardayda caalamiga ah ee codsanaya waxbarasho Beljam waa inuu fiiriyaa qaar ka mid ah deeqda waxbarasho ee ugu fiican Belgium in ay dalban karaan.
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: ,1,500 XNUMX sanad dugsiyeedkiiba.
Jaamacadaha ugu Fiican Belgium ee Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Leuven, Belgium, Vrije Universiteit Brussel (VUB) iyo Université Libre de Bruxelles (ULB)
Hungary, oo ah waddan dhul xiran oo ku yaal bartamaha Yurub sidoo kale waxay u muuqataa mid ka mid ah dalalka ugu raqiisan Yurub ee wax lagu barto, labadaba ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Haddii aad rabto in aad wax ku barashada Hungary, waa inaad ogaataa in Hungary ay tahay mid ka mid ah waddamada deeqaha waxbarasho ee dowladdu ka hesho ardayda caalamiga ah. Waad codsan kartaa deeqaha waxbarasho ee Hangari ee la heli karo iyo sidoo kale waxaad fursad u heli kartaa in lagu siiyo deeq waxbarasho oo toos ah haddii aad horey u haysatay diiwaanno aqoonyahanno oo wanaagsan.
Dadka reer Nigeria, dowladda Federaalka ee Nigeria waxay sidoo kale siisaa fursad deeq-lacageed oo dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda Nigerian inay wax ku bartaan Hungary iyada oo loo marayo heshiiska waxbarashada labada dhinac madal deeq waxbarasho, waad codsan kartaa deeqda waxbarasho sidoo kale.
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: ,1,000 XNUMX sanad dugsiyeedkiiba.
Jaamacadaha Hangari ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Debrecen, Jaamacadda Szeged, Jaamacadda Corvinus ee Budapest, iyo Jaamacadda Eötvös Loránd.
Dadka qaarkiis, Talyaanigu waa waddanka ugu fiican Yurub ee barashada farshaxanka. Talyaanigu waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan Yurub ee ardayda caalamiga ah ee wax ku barta dibadda.
Talyaanigu wuxuu ka mid yahay meelaha ugu fiican ee lagu barto Yurub, iyada oo celcelis ahaan qiimaha nolosha ay weheliso xaqiiqda ah in qaar ka mid ah jaamacadaha halkaa ku yaal aysan sameynin qaado wixii khidmad ah ee dalabka ah, Talyaanigu wuxuu qaataa tiro wanaagsan oo ardayda caalamiga ah sanadkiiba.
Ku wax ka barta Talyaaniga, Uma baahnid shahaado imtixaan Ingiriis ah laakiin waxaad u baahan kartaa inaad qaadatid koorso luqadeed sannadkaaga ugu horreeya ee waxbarashada sida loogu sameeyo ardayda caalamiga ah ee dhammaan waddamada Yurub.
Jaamacadaha Talyaaniga ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Bologna, Jaamacadda Rome La Sapienza, Polytechnic University of Milan, University of Rome Tor Vergata, iwm.
Faransiiska waa mid ka mid ah dalalka ugu raqiisan Yurub ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, waxay leeyihiin nidaam waxbarasho oo wanaagsan iyo hoy qiimo jaban leh.
Ku Waxbarashada Faransiiska, waxaad u baahan tahay inaad marka hore codsato gelitaanka jaamacad kasta oo caalami ah oo dalka ku taal, hesho warqad tixgelin gelitaan ah ka hor intaadan u gudbin si aad u dalbato fiiso arday iyada oo loo marayo safaaradda Faransiiska ee dalkaaga.
Waxaan horey u qeexnay a liiska jaamacadaha ku yaal Faransiiska ardayda caalamiga ah. Jaamacadahaani waxay wax ku bartaan Ingiriisiga waxayna tixgeliyaan joogitaanka ardayda caalamiga ah inta badan howlahooda. Waxaan sidoo kale taxnay tiro ka mid ah jaamacadaha ugu jaban gudaha Faransiiska ardayda caalamiga ah sidoo kale waad dalban kartaa
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: US $ 1,000 sanad dugsiyeedkiiba.
Jaamacadaha ugu Fiican Faransiiska Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Lyon, France, Ecole Normale Supérieure de Lyon iyo Université Jean Moulin Lyon.
ALSO READ: Tilmaamaha Si Aad Wax Ugu Barato Dibadda Faransiiska
Finland ma bixiso waxbarid khidmad ah khidmadda waxbarashada iyo shahaadada bachelorka ee ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba, in kastoo, qaar ka mid ah barnaamijkooda shahaadada mastarka ay leeyihiin khidmad waxbarasho oo loogu talagalay ardayda aan caalamiga ahayn ee EU / EEA.
Sida laga soo xigtay Waxbarashada Finland degel Ma jiro wax khidmad ah oo laga qaadayo shahaadooyinka tacliinta sare ee Finland oo bilaabmaya deyrta 2014, iyadoon loo eegin heerka daraasadda iyo dhalashada ardayga. ”
Tani waxay ka dhigan tahay in waxbarashada jaamacadda Finland ay tahay mid bilaash u ah qof walba. Tani waxay ka dhigeysaa Finland suurtogal ahaan waddanka ugu raqiisan Yurub ee ardayda.
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: Eber.
Jaamacadaha ugu Fiican Finland Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Aalto iyo Jaamacadda Helsinki.
Jaamacadaha bulshada ee Austria waxay leeyihiin iskucelcelis khidmad waxbarasho oo ku saabsan 726.72 Euros iyo 17.50 Euros oo dheeri ah oo loogu talagalay caymiska iyo khidmadda midowga ardayda Australiya xilli dugsiyeedkiiba.
Muwaadiniinta ugu yar wadamada horumaray waxay leeyihiin waxbarasho bilaash ah jaamacadaha dadweynaha Austrian waxayna bixiyaan kaliya 17.50 Euros sanadkiiba.
Jaamacadaha Austrian ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Vienna, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Jaamacadda Graz, iwm.
Noorway gudaheeda, ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba waxay kujiraan waxbarasho bilaash ah markaa markaad raadineyso jaamacado yurub ah oo raqiis ah ardayda caalamiga ah, jaamacadaha Norway waa inay kujiraan liiska koowaad.
In kasta oo ay jirto waxbarid bilaash ah, inaad wax ku barato Norway, waxaad weli u baahan tahay inaad iska bixiso guryaha, qiimaha duulimaadkaaga oo aad daryeesho nafsaddaada sidoo kale illaa aad ku guuleysato abaalmarin kasta ama deeq waxbarasho oo kaa caawin karta inaad ka taxaddarto kuwan. Noorway waxay kujirtaa liiska waddamada ay ardaydu wax ku baran karaan bilaash.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad caddeyso aqoonta aad u leedahay luqada norwejiga ama aad qaadato koorso luqadeed oo ah sanadka ugu horeeya ee booqashadaada si buuxda laguu dhigo.
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: BILAASH.
Jaamacadaha ugu Fiican Noorway Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Oslo, Jaamacadda Bergen, Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyada ee Norway iyo Jaamacadda Tromso
Barnaamijyada PhD waa bilaash ardayda caalamiga ah ee Iswidhan wax ku barta iyo barnaamijyada kaleba waxaa jira dhowr barnaamijyo deeq-waxbarasho oo dhammaystiran oo qayb ahaan ah iyadoo laga dhaafayo waxbarashada ardayda caalamiga ah.
Austria waa mid ka mid ah wadamada ugu raqiisan Yurub ee wax lagu barto, labadaba gudaha iyo caalamkaba. Haddii aad rabto in aad wax ka barta Austria, waxaad u baahan doontaa inaad soo bandhigto dhibcaha imtixaanka aqoonta luqadda.
Qiimaha Nolosha: Ahaan sare
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: SEK80, 000 sanadkiiba.
Jaamacadaha Iswiidhan ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Jaamacadda Lund, Jaamacadda Uppsala, Machadka Karolinska, Machadka Royal ee Teknolojiyada iyo Iskuulka Dhaqaalaha ee Stockholm.
Ukraine waa mid ka mid ah wadamada ugu raqiisan Yurub ardayda. In kasta oo IELTS aysan khasab ku ahayn gelitaanka, waxaad weli u baahan kartaa inaad soo bandhigto natiijada imtixaanka luqadda.
Ku Waxbarashada Ukraine, waad dalban kartaa gelitaanka mid ka mid ah dugsiyada hoos ku taxan.
Kharashka Iskucelceliska Lacagta: dhexdhexaad ah.
Jaamacadaha Yukreeniyaan ee ugu Fiican Ardayda Caalamiga ah: Kharkiv National University Medical, Dnipropetrovsk State Medical Academy, Yukreeniyaan Medical Stomatological Academy, Crimea State Medical University, Odesa State University Medical.
Wadamada Yurub Ugu Qaalisan Si Loo Bartojaamacadaha waxbarashada hoose ee YurubJaamacadaha Yurubta ah
Previous Post:Sida wax loogu barto dibadda iyadoo deeq waxbarasho laga helayo waddan kasta, halkan ka dalbo
Post Next:Xarumaha Imtixaanka TOEFL ee Galbeedka Afrika
Jatin Malhotra wuxuu leeyahay,
September 7, 2021 at 5: 26 pm
hi, waxaan rabaa inaan wax ku barto dibedda lacag la'aan